၁၄ သြဂုတ်၊ ၂၀၂၀
တောင်သာမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံး မုခ်ဦးဆိုင်းဘုတ် (ဓါတ်ပုံ- Union Solidarity and Development Party)
လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အရင်အစိုးရပါတီ ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ပြိုင်နိုင်ပေမဲ့၊ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် သဘောထားကြီးပြီး လျော့ပြိုင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအစိုးရပါတီ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ အပြတ်အသတ်နိုင်ပြီး အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ၊ ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အနေနဲ့ကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပါ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့ ရည်မှန်းပြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရားမမျှတမှာကို စိုးရိမ်နေကြတဲ့ ပါတီ အဓိကခေါင်းဆောင်တွေကို ကိုဝင်းမင်းက မေးမြန်းထားပါတယ်။
အရင်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ ပါတီဗဟိုဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ ဦးစိုးသိန်းက ဒီတစ်ခေါက် ပါတီနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ထူးခြားမူကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
“လူသစ်တွေပါလာတာပါတယ်။ ပညာတတ်တာရယ်၊ နည်းနည်းလှုပ်ရှားမူတွေ လူထုကြိုက်မယ်ထင်တာပေါ့ဗျာ။ အရင်ထက်တော့ ကျွန်တော်တော့် Target (ရည်မှန်းချက်) ထားတာပေါ့၊ (၁၀၀) လောက် များနိုင်မလားပေါ့။ အရင်တုံးက (၄၀) နိုင်တာကို။ ဟိုဘက်ကလည်း (၅) နှစ်လုပ်ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့၊ ဦးသိန်းစိန် Government (အစိုးရ) နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ကြတာပေါ့၊ လက်ရှိ Existing Government (အစိုးရ) က အမှတ်တွေ လျော့တာပေါ့ဗျာ၊ ဒီ Socio-economy (လူမူစီးပွား) ပေါ့၊ ဒါတွေကျသွားတာတွေ။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ Criteria (စံသတ်မှတ်ချက်) တချို.ပေါ့၊ အဓိက Freedom (လွတ်လပ်ခွင့်) ပေါ့၊ Expression (ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း) တို့၊ ဒါတွေက ရက်ရက်စက်စက် ကျသွားတယ်ဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ Political Party (နိုင်ငံရေးပါတီ) တွေကို နေရာမပေးတာတို့၊ နားမထောင်တာတို့။”
ဒါ့အပြင် ဒီတစ်ခေါက် ထူးခြားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် သဘောထားကြီးပေးထားတဲ့အပေါ်၊ ပါတီ ဒုဥက္ကဌ (၂) ဖြစ်ပြီး၊ အရင် လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးခင်ရီက -
“အရင်တုန်းက ၂၀၁၅ တုံးက ကျွန်တော်တို့က နေရာအားလုံးနီးပါး ပြိုင်တယ်ဗျ၊ ဒီတစ်ပတ်တော့ (၂၇) နေရာကို လွှတ်ပေးထားတယ်၊ အများအားဖြင့် ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်ဗျ။ ကချင်မှာရှိတဲ့ ဆော့လော်ဒေသမျိုးလို၊ ရှမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင်၊ ပင်လောင်း ၊ ပအို့နယ်မြေပေါ့၊ နောက် ဒီရှမ်းအရှေ.မှာရှိတဲ့ အာခါလူမျိုးစု၊ လားဟူလူမျိုးစုနေရာမျိုးတို့လို၊ ချင်းမှာရှိတဲ့ ဖလမ်းတို့၊ မတူပီတို့နေရာမျိုးလို၊ ဒီပြည်မမှာလည်း ရန်ကုန်မှာဆို ရခိုင်လူမျိုးစုနေရာမျိုး၊ မန္တလေးမှာဆို ရှမ်းလူမျိုးစုနေရာမျိုး လွှတ်ထားပေးတာပေါ့။ အင်အားအပြည့်အဝပြိုင်လို့ရတဲ့ ပါတီမျိုးလေ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကို လွှမ်းခြုံလို့ရတဲ့ ပါတီမျိုးပေါ့။ တချို့နဲ့လည်း စကားပြောတာရှိတယ်၊ တချို.လည်း အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ ပြည်သူက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကို ပိုပြီးတော့ လက်ခံတယ်ဆိုရင်၊ ပိုပြီးတောင့် ကောင်းနိုင်မယ့် လူမျိုးဆို၊ ကျွန်တော်တို့က သက်သက်ကို နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တာတွေရှိပါတယ်။”
နောက် ထူးခြားတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီတစ်ခေါက် တပ်မတော်ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေ ပါမလာတဲ့အပေါ် ဦးခင်ရီကပဲ -
“နည်းနည်းပါးပါးတော့ ပါတယ်ဗျ၊ ဒါပေမဲ့ အငြိမ်းစားယူပြီးသား သူတွေပါပဲ၊ ကပ်ပြီးတော့ လာတဲ့သူတွေတော့ မရှိသလောက်ပါဘဲ။”
ဦးခင်ရီကပဲ ဒီတစ်ခေါက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်က ညွှန့်ပေါင်းဖြစ်စေဖို့များပြီး၊ အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ပြိုင်တာပေါ့နော်။ သို့သော်လည်းပဲ၊ ဒီနေ့ ဒီအချိန်က တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သဘောထားကို အလေးထားဖို့ လိုတဲ့ကာလ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ Landslide (တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်တာ) ဆိုတာမျိုးထက်၊၊ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ ဒါမျိုးကို ကျွန်တော်တို့က ပိုပြီး လိုလားပါတယ်။ အခုအခါမှာလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တာဝန်က၊ ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတော့ဗျာ၊ ဖယ်ဒရယ်ကို ဦးစားပေးတဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နဲ့ ပြည်မနဲ့ ညှိနှိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကများလာတော့၊ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်တယ်ထင်လို့ ကျွန်တော်တို့ CEC (ဗဟိုအလုပ်အမူဆောင်ကော်မတီ) က ဒီအတိုင်းဆုံးဖြတ်ကြတာပါ။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ဒီ Constitution (ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေ) မှာလည်း ဖယ်ဒရယ်ရဲ့ အရိပ်အငွေ့တွေပါနေတယ်လေ ။ နောက်မှာရှိတဲ့ ဇယားတွေမှာ Power Sharing (လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေတာ)၊ Resource Sharing (သယံဇာတအရင်းအမြှစ်ခွဲဝေတာ)၊ Tax Sharing (အခွန်ငွေမျှဝေတာ)၊ ပြည်နယ်နဲ့ ပြည်မနဲ့ ခုလိုညိနှိုင်းကြတာတွေရှိတယ်။”
ဦးစိုးသိန်းကလည်း စုပေါင်းညီညွတ်ရေးအစိုးရမျိုး ပေါ်လာပြီး၊ တစ်ပါတီထဲ၊ တစ်ဦးထဲ မလုပ်မှ တိုင်းပြည်ကောင်းမှာလို့ ဆိုပါတယ်။
“ဒီမဟာမိတ်ဖွဲ့မှ Coalition (ညွန့်ပေါင်း) သို့မဟုတ်၊ Unity government (စုပေါင်းညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဖြစ်မှ ရမယ်ဆိုတာမျိုး၊ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရော၊ ကျွန်တော်တို့တွေရော အားလုံးနားလည်ကြတယ်၊ ယုံကြည်ကြတယ်။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ အမြဲတွေ့တယ်၊ သူတို့နိုင်အောင်လုပ်၊ သူတို့ ဒေသတွေမှာ၊ ပြည်နယ်တွေမှာ ကိုယ့်အစိုးရ ကိုယ်ဖွဲ့နိုင်အောင်ကြိုးစား၊ အပေါ်ကခိုင်းတဲ့၊ ပြည်ထောင်စုက ခိုင်းတဲ့ အစိုးရမဖြစ်စေနဲ့။ ဒါကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှန်းပြီးဆောင်ရွက်နေတာ၊ ဒါပဲ Unity Government (စုပေါင်းညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ကိုမှန်းပြီး လုပ်နေကြတာ။ တစ်ပါတီထဲ၊ အာဏာရှင်ဆန်ဆန်၊ ရွေးကောက်ခံအာဏာရှင်ပေါ့ဗျာ၊ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့ မကြိုက်တော့ဘူး။ တစ်ယောက်ထဲက လုပ်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ၊ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မျိုးမှာ။”
ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရားမမျှတမှာ အထူးစိုးရိမ်နေပုံကို ဦးခင်ရီက -
“Free and Fair Election (လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ) ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ချက် ပဲဗျ။ အဲ့ဒီတော့ ပြည်သူက မဲပေးဖို့အတွက်၊ ကိုယ့်နာမည် မဲစာရင်းမှာ ကြည့်ရင်တောင်မှ၊ မှားရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ၊ ပညာပေးမူ Voter Education က အလွန်တရာ အားနည်းတယ်။ တချို.အခု ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ၊ အတော်များများ မဲစာရင်းတွေ ထပ်နေတယ်၊ နာမည်တွေ တူနေတယ်၊ အဖေနာမည် မှားနေတယ်၊ တချို. မှတ်ပုံတင်နံပါတ် မှားနေတယ်၊ ဒါတွေဟာ တကယ်မှာဆို ပယ်မဲတွေဖြစ်သွားမယ်လေ။ နောက် NGO တွေလေဗျာ။ တချိန်လုံး ဒီ NGO တွေဆိုတာ ဒီလုပ်ငန်းကို ကူလာခဲ့တာ၊ အခု PACE (People's Alliance For Credible Elections-ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့) ကိုတောင်မှ၊ အခု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး ပိတ်ပင်တာဆီးတဲ့အခါကျတော့ အများကြီးသံသယရှိတယ်။”
ဦးစိုးသိန်းကလည်း UEC လို့ခေါ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို -
“UEC က Fair (မျှမျှတတ) မှ မဖြစ်တာ၊ သူ ဒါကို နားမလည်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ သဘောကို နားမလည်ဘူး။ Fair (မျှမျှတတ) လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သူနားမလည်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရတုန်းက နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကို လက်ခံတယ်၊ ကြိုဆိုတယ်။ အခုက လက်မှမခံတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ။ နောက် ဥပမာပြောရရင်၊ ကျွန်တော်တို့က လူစုလို့မရဘူး၊ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအစိုးရက စုပြီးတော့ လိုက်ဟောနေ ပြောနေတဲ့ဟာတွေ တွေ့နေရတာပဲ။”
အဲ့ဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတဖို့ လိုအပ်တာတွေကို ဦးခင်ရီကဆက်ပြီး -
“ဒီကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်က တိတိကျကျ သမာသမတ် ဆန်ဆန် လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ နောက် သူ့ကို Check and Balance (စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိုတာ) လုပ်မဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ စစ်ဆေးခွင့်၊ အထူးသဖြင့် ဘက်မလိုက်တဲ့ NGO တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို၊ အခုမပေးတာတောင်၊ နဂိုတုံးကအတိုင်းပေးဖို့လိုတယ်ဗျ။”
ဒီအပေါ် ဦးစိုးသိန်းကလည်း -
“ဒီ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ရှီဂျင်းပင် Government (တရုတ်အစိုးရ) လိုမျိုးက ပြောပေးရမှာပေါ့၊ Government (မြန်မာအစိုးရ) အနေနဲ့ UEC (ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်) ကို၊ Please (ကျေးဇူးပြုပြီး) ဒီမိုကရက်တစ် Elections (ရွေးကောက်ပွဲ) မှာ၊ Free and Fair (လွတ်လပ်မျှတတာ) ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ပြည်တွင်းကကျတော့ Free and Fair မဖြစ်ရင်၊ ကျွန်တော်တို့က သူပုန်ထမှာပေါ့ဗျ၊ ဘာခက်လဲ။”
အဲ့ဒီတော့ လက်ရှိ မြန်မာဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေ အဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုဝငျဘာရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီ ဘယျလို ပွငျဆငျနသေလဲ
လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲမှာ အရငျအစိုးရပါတီ ပွညျထောငျစုကွံခိုငျရေးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီအနနေဲ့ တဈနိုငျငံလုံးမှာ ပွိုငျနိုငျပမေဲ့၊ တိုငျးရငျးသားတှအေပျေါ သဘောထားကွီးပွီး လြော့ပွိုငျထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
လကျရှိအစိုးရပါတီ NLD အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျအနနေဲ့ အပွတျအသတျနိုငျပွီး အစိုးရဖှဲ့ဖို့ ကွိုးပမျးနခြေိနျမှာ၊ ကွံခိုငျဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ အနနေဲ့ကတော့ တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ပါ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရဖှဲ့ဖို့ ရညျမှနျးပွီးပွငျဆငျနပေါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ တရားမမြှတမှာကို စိုးရိမျနကွေတဲ့ ပါတီ အဓိကခေါငျးဆောငျတှကေို ကိုဝငျးမငျးက မေးမွနျးထားပါတယျ။
အရငျသမ်မတရုံးဝနျကွီးဟောငျးနဲ့ ပါတီဗဟိုဗဟိုအတိုငျပငျခံ ဦးစိုးသိနျးက ဒီတဈခေါကျ ပါတီနဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ထူးခွားမူကိုအခုလိုပွောပါတယျ။
“လူသဈတှပေါလာတာပါတယျ။ ပညာတတျတာရယျ၊ နညျးနညျးလှုပျရှားမူတှေ လူထုကွိုကျမယျထငျတာပေါ့ဗြာ။ အရငျထကျတော့ ကြှနျတျောတေျာ့ Target (ရညျမှနျးခကျြ) ထားတာပေါ့၊ (၁၀၀) လောကျ မြားနိုငျမလားပေါ့။ အရငျတုံးက (၄၀) နိုငျတာကို။ ဟိုဘကျကလညျး (၅) နှဈလုပျပွပွီးတဲ့အခါကတြော့၊ ဦးသိနျးစိနျ Government (အစိုးရ) နဲ့ ယှဉျကွညျ့ကွတာပေါ့၊ လကျရှိ Existing Government (အစိုးရ) က အမှတျတှေ လြော့တာပေါ့ဗြာ၊ ဒီ Socio-economy (လူမူစီးပှား) ပေါ့၊ ဒါတှကေသြှားတာတှေ။ ဒီမိုကရစေီရဲ့ Criteria (စံသတျမှတျခကျြ) တခြို.ပေါ့၊ အဓိက Freedom (လှတျလပျခှငျ့) ပေါ့၊ Expression (ဆန်ဒထုတျဖျောခွငျး) တို့၊ ဒါတှကေ ရကျရကျစကျစကျ ကသြှားတယျဗြာ။ နောကျပွီးတော့ Political Party (နိုငျငံရေးပါတီ) တှကေို နရောမပေးတာတို့၊ နားမထောငျတာတို့။”
ဒါ့အပွငျ ဒီတဈခေါကျ ထူးခွားတဲ့ တိုငျးရငျးသားတှအေတှကျ သဘောထားကွီးပေးထားတဲ့အပျေါ၊ ပါတီ ဒုဥက်ကဌ (၂) ဖွဈပွီး၊ အရငျ လူဝငျမူကွီးကွပျရေး ဝနျကွီးဟောငျးလညျးဖွဈတဲ့ ဦးခငျရီက -
“အရငျတုနျးက ၂၀၁၅ တုံးက ကြှနျတျောတို့က နရောအားလုံးနီးပါး ပွိုငျတယျဗြ၊ ဒီတဈပတျတော့ (၂၇) နရောကို လှတျပေးထားတယျ၊ အမြားအားဖွငျ့ ပွညျနယျ တိုငျးရငျးသား နယျမွတှေဖွေဈတယျဗြ။ ကခငျြမှာရှိတဲ့ ဆော့လျောဒသေမြိုးလို၊ ရှမျးတောငျမှာရှိတဲ့ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုငျ၊ ပငျလောငျး ၊ ပအို့နယျမွပေေါ့၊ နောကျ ဒီရှမျးအရှေ.မှာရှိတဲ့ အာခါလူမြိုးစု၊ လားဟူလူမြိုးစုနရောမြိုးတို့လို၊ ခငျြးမှာရှိတဲ့ ဖလမျးတို့၊ မတူပီတို့နရောမြိုးလို၊ ဒီပွညျမမှာလညျး ရနျကုနျမှာဆို ရခိုငျလူမြိုးစုနရောမြိုး၊ မန်တလေးမှာဆို ရှမျးလူမြိုးစုနရောမြိုး လှတျထားပေးတာပေါ့။ အငျအားအပွညျ့အဝပွိုငျလို့ရတဲ့ ပါတီမြိုးလေ၊ တဈနိုငျငံလုံးကို လှမျးခွုံလို့ရတဲ့ ပါတီမြိုးပေါ့။ တခြို့နဲ့လညျး စကားပွောတာရှိတယျ၊ တခြို.လညျး အခွအေနကွေညျ့ပွီးတော့ ပွညျသူက တိုငျးရငျးသားလူမြိုးကို ပိုပွီးတော့ လကျခံတယျဆိုရငျ၊ ပိုပွီးတောငျ့ ကောငျးနိုငျမယျ့ လူမြိုးဆို၊ ကြှနျတျောတို့က သကျသကျကို နောကျဆုတျပေးလိုကျတာတှရှေိပါတယျ။”
နောကျ ထူးခွားတာတဈခုဖွဈတဲ့ ဒီတဈခေါကျ တပျမတျောထိပျပိုငျးအရာရှိတှေ ပါမလာတဲ့အပျေါ ဦးခငျရီကပဲ -
“နညျးနညျးပါးပါးတော့ ပါတယျဗြ၊ ဒါပမေဲ့ အငွိမျးစားယူပွီးသား သူတှပေါပဲ၊ ကပျပွီးတော့ လာတဲ့သူတှတေော့ မရှိသလောကျပါဘဲ။”
ဦးခငျရီကပဲ ဒီတဈခေါကျရှေးကောကျပှဲရလဒျက ညှနျ့ပေါငျးဖွဈစဖေို့မြားပွီး၊ အာဏာခှဲဝကေငျြ့သုံးဖို့ ရညျမှနျးထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“နိုငျမယျလို့ ယုံကွညျခကျြနဲ့ ပွိုငျတာပေါ့နျော။ သို့သျောလညျးပဲ၊ ဒီနေ့ ဒီအခြိနျက တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ သဘောထားကို အလေးထားဖို့ လိုတဲ့ကာလ၊ တဈဦးတဈယောကျထဲ Landslide (တောငျပွိုကမျးပွိုနိုငျတာ) ဆိုတာမြိုးထကျ၊၊ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရမြိုးဖွဈမယျထငျတယျ၊ ဒါမြိုးကို ကြှနျတျောတို့က ပိုပွီး လိုလားပါတယျ။ အခုအခါမှာလညျး တိုငျးပွညျရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတာဝနျက၊ ဖယျဒရယျဒီမိုကရစေီပွညျထောငျစုဆိုတော့ဗြာ၊ ဖယျဒရယျကို ဦးစားပေးတဲ့ တိုငျးနဲ့ပွညျနယျနဲ့ ပွညျမနဲ့ ညှိနှိုငျးတဲ့လုပျငနျးတှကေမြားလာတော့၊ လကျရှိအခွအေနနေဲ့ အံဝငျဂှငျကဖြွဈတယျထငျလို့ ကြှနျတျောတို့ CEC (ဗဟိုအလုပျအမူဆောငျကျောမတီ) က ဒီအတိုငျးဆုံးဖွတျကွတာပါ။ လကျရှိလုပျနတေဲ့ ဒီ Constitution (ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံဥပဒေ) မှာလညျး ဖယျဒရယျရဲ့ အရိပျအငှတှေ့ပေါနတေယျလေ ။ နောကျမှာရှိတဲ့ ဇယားတှမှော Power Sharing (လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာခှဲဝတော)၊ Resource Sharing (သယံဇာတအရငျးအမွှဈခှဲဝတော)၊ Tax Sharing (အခှနျငှမြှေဝတော)၊ ပွညျနယျနဲ့ ပွညျမနဲ့ ခုလိုညိနှိုငျးကွတာတှရှေိတယျ။”
ဦးစိုးသိနျးကလညျး စုပေါငျးညီညှတျရေးအစိုးရမြိုး ပျေါလာပွီး၊ တဈပါတီထဲ၊ တဈဦးထဲ မလုပျမှ တိုငျးပွညျကောငျးမှာလို့ ဆိုပါတယျ။
“ဒီမဟာမိတျဖှဲ့မှ Coalition (ညှနျ့ပေါငျး) သို့မဟုတျ၊ Unity government (စုပေါငျးညီညှတျရေးအစိုးရ) ဖွဈမှ ရမယျဆိုတာမြိုး၊ တိုငျးရငျးသားပါတီတှရေော၊ ကြှနျတျောတို့တှရေော အားလုံးနားလညျကွတယျ၊ ယုံကွညျကွတယျ။ တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့တှနေဲ့ အမွဲတှတေ့ယျ၊ သူတို့နိုငျအောငျလုပျ၊ သူတို့ ဒသေတှမှော၊ ပွညျနယျတှမှော ကိုယျ့အစိုးရ ကိုယျဖှဲ့နိုငျအောငျကွိုးစား၊ အပျေါကခိုငျးတဲ့၊ ပွညျထောငျစုက ခိုငျးတဲ့ အစိုးရမဖွဈစနေဲ့။ ဒါကြှနျတျောတို့ အားလုံးမှနျးပွီးဆောငျရှကျနတော၊ ဒါပဲ Unity Government (စုပေါငျးညီညှတျရေးအစိုးရ) ကိုမှနျးပွီး လုပျနကွေတာ။ တဈပါတီထဲ၊ အာဏာရှငျဆနျဆနျ၊ ရှေးကောကျခံအာဏာရှငျပေါ့ဗြာ၊ အဲ့ဒါကို ကြှနျတျောတို့ မကွိုကျတော့ဘူး။ တဈယောကျထဲက လုပျတာ မဖွဈနိုငျဘူးလေ၊ ကြှနျတျောတို့ တိုငျးပွညျမြိုးမှာ။”
ဒါပမေယျ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ တရားမမြှတမှာ အထူးစိုးရိမျနပေုံကို ဦးခငျရီက -
“Free and Fair Election (လှတျလပျမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲ) ဖွဈပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမျခကျြ ပဲဗြ။ အဲ့ဒီတော့ ပွညျသူက မဲပေးဖို့အတှကျ၊ ကိုယျ့နာမညျ မဲစာရငျးမှာ ကွညျ့ရငျတောငျမှ၊ မှားရငျ ဘာလုပျရမယျဆိုတာ၊ ပညာပေးမူ Voter Education က အလှနျတရာ အားနညျးတယျ။ တခြို.အခု ကြှနျတျောတို့ဆီမှာ၊ အတျောမြားမြား မဲစာရငျးတှေ ထပျနတေယျ၊ နာမညျတှေ တူနတေယျ၊ အဖနောမညျ မှားနတေယျ၊ တခြို. မှတျပုံတငျနံပါတျ မှားနတေယျ၊ ဒါတှဟော တကယျမှာဆို ပယျမဲတှဖွေဈသှားမယျလေ။ နောကျ NGO တှလေဗြော။ တခြိနျလုံး ဒီ NGO တှဆေိုတာ ဒီလုပျငနျးကို ကူလာခဲ့တာ၊ အခု PACE (People's Alliance For Credible Elections-ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ပွညျသူ့လှုပျရှားမှုအဖှဲ့) ကိုတောငျမှ၊ အခု စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာရေး ပိတျပငျတာဆီးတဲ့အခါကတြော့ အမြားကွီးသံသယရှိတယျ။”
ဦးစိုးသိနျးကလညျး UEC လို့ချေါတဲ့ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရဲ့ အားနညျးခကျြကို -
“UEC က Fair (မြှမြှတတ) မှ မဖွဈတာ၊ သူ ဒါကို နားမလညျဘူး။ ဒီမိုကရစေီရဲ့ သဘောကို နားမလညျဘူး။ Fair (မြှမြှတတ) လုပျရမယျဆိုတာ သူနားမလညျဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အစိုးရတုနျးက နိုငျငံတကာက စောငျ့ကွညျ့ရေးအဖှဲ့တှကေို လကျခံတယျ၊ ကွိုဆိုတယျ။ အခုက လကျမှမခံတာ ဘယျသူ့ကိုမှ။ နောကျ ဥပမာပွောရရငျ၊ ကြှနျတျောတို့က လူစုလို့မရဘူး၊ ဒါပမေဲ့ လကျရှိအစိုးရက စုပွီးတော့ လိုကျဟောနေ ပွောနတေဲ့ဟာတှေ တှနေ့ရေတာပဲ။”
အဲ့ဒီတော့ ရှေးကောကျပှဲ တရားမြှတဖို့ လိုအပျတာတှကေို ဦးခငျရီကဆကျပွီး -
“ဒီကျောမရှငျကိုယျတိုငျက တိတိကကြ သမာသမတျ ဆနျဆနျ လုပျဖို့လိုတယျ၊ နောကျ သူ့ကို Check and Balance (စောငျ့ကွညျ့ထိနျးညှိုတာ) လုပျမဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတှရေဲ့ စဈဆေးခှငျ့၊ အထူးသဖွငျ့ ဘကျမလိုကျတဲ့ NGO တှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍကို၊ အခုမပေးတာတောငျ၊ နဂိုတုံးကအတိုငျးပေးဖို့လိုတယျဗြ။”
ဒီအပျေါ ဦးစိုးသိနျးကလညျး -
“ဒီ အနောကျနိုငျငံတှနေဲ့ ရှီဂငျြးပငျ Government (တရုတျအစိုးရ) လိုမြိုးက ပွောပေးရမှာပေါ့၊ Government (မွနျမာအစိုးရ) အနနေဲ့ UEC (ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ) ကို၊ Please (ကြေးဇူးပွုပွီး) ဒီမိုကရကျတဈ Elections (ရှေးကောကျပှဲ) မှာ၊ Free and Fair (လှတျလပျမြှတတာ) ဖွဈအောငျ လုပျဖို့ တိုကျတှနျးပါတယျ။ ပွညျတှငျးကကတြော့ Free and Fair မဖွဈရငျ၊ ကြှနျတျောတို့က သူပုနျထမှာပေါ့ဗြ၊ ဘာခကျလဲ။”
အဲ့ဒီတော့ လကျရှိ မွနျမာဒီမိုကရစေီ အပွောငျးအလဲမှာ အရေးကွီးတဲ့ လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲတှေ အဆငျပွခြေောမှဖေို့ စောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။